ဗိုလ်ကြီးကောင်းဘွိုင် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဗိုလ်ကြီးကောင်းဘွိုင်
ဗိုလ်ကြီးကောင်းဘွိုင် APK ကို
- ကြီးမားတဲ့ handcrafted ကမ္ဘာကြီး Explore
- စိန်ဘို့သင့် Quest များအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ Get
- ထိုနေရာလေးကို automap နှင့်အတူပြန်လမ်းကြောင်းအပေါ် Get
- ဖော်ရွေ Snorkhogs နှင့်အန္တရာယ်ရှိ Gnurfs နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းကြောင်း!
- ရွေ့လျားမှုအထိခိုက်မခံလေဆာထွက်နေတဲ့များ၏ရှေ့မှောက်၌ကျသွားကျောက် Avalanche Create
- အတော်လေးအထင်ကြီးရေရူပဗေဒနှင့်အတူရေအောက်တွင်း Explore
- လျှို့ဝှက်အာကာသစခန်း Discotek သွားရောက်
- မျက်နှာပြင်နှင့်ဇာတ်ဆောင် CRT-shader အပေါ် 8 ထုထည်ကြီးမားသော Parallax အုပ်ကြွပ်သုံးပြီး videochip အခြေစိုက်ဟန်ပြပြုလုပ်ထားသော 1008 နည်းနည်း char
အားလုံး In-app ကိုဝယ်ယူမှုအဘယ်သူမျှမ featuring ကဒီနည်းနည်းတဦးတည်းလက်ပုံတူပဟေဠိစွန့်စားမှုအတွက်, အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာနှင့်အပိုစျေးနှုန်းတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်နေဆဲဖြစ်သည်။ နှင့်မျှမတို့သင်ခန်းစာ! ဒါဟာသင်နှင့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်သာလုပ်!
Wadonk AB အားဖြင့် Vislanda, ဆွီဒင်အတွက် Created ။
- 480dpi device များအတွက် finetuned မှုန်ဝါး။
(နီးပါးမြင်နိုင်ဇယားကွက်များကဲ့သို့) လည်းမှုန်ဝါးသို့မဟုတ်လွန်းချွန်ထက်သည့် CRT-filter ကိုသင်ရှာလိုလျှင်
ငါတို့သည်သင်တို့၏စက်ပစ္စည်းအတွက် finetune နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ပရမ်းပတာများအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်, ဒါပေမယ့် Android ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားပလက်ဖောင်းသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ပြီးပြည့်စုံအတွေ့အကြုံရှိသည်ချင်! 🙂
42.91 ကို MB